टोपी लगाउनेहरु भन्छन्, ‘टोपी लगाउँदाको सान नै बेग्लै हुन्छ’ « Pahilo News
टोपी लगाउनेहरु भन्छन्, ‘टोपी लगाउँदाको सान नै बेग्लै हुन्छ’
प्रकाशित मिति : 1 January, 2017 1:31 pm
१७ पुस । जननेता मदन भण्डारीको टोपी नलाएको तस्बिर भेट्न मुस्किलै पर्छ । भण्डारी जहिल्यै ढाकाटोपी लगाउँथे । र, उनको व्यक्तित्वमा टोपीले अझै निखार ल्याउँथ्यो ।
आज टोपी दिवस । शनिबार बेलुकीदेखि बढेको चिसोको कुनै पर्वाह नगरी आइतबार बिहानै माइतीघर मण्डलामा भर्खरका युवायुवतीहरु नेपाली टोपी लगाएर टोपी दिवस मनाउन तल्लिन देखिन्थे । उनीहरुले टाउकोमा टोपी सजाएर यो वर्षको टोपी दिवस मनाए । आखिर, टोपी नेपालीहरुको मौलिक पहिचान हो, यसलाई बिर्सन कसले पो सक्छन् र ?
नेताहरुदेखि सामान्य जनतासमेत टोपीमा प्रायः टोपीमा सजिन्छन् । नेकपा (एमाले) का नेताहरु अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम प्रायः टोपीमै देखिन्छन् । एमालेकै अरु नेताहरु वेदूराम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल पनि टोपी लगाउनै रुचाउँछन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रायः टोपीमै हुन्छन् । तर, महामन्त्री शशांक कोइराला, शेखर कोइराला, गगन थापाहरुले त्यति टोपी लगाएको देखिँदैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा त टोपी लगाउने नेताहरु पाउनै मुस्किल छ ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत पनि प्रायः टोपी लगाउँछन् । सबैले नेपालीको पहिचान झल्किने भएको हुँदा टोपी लगाउने गरेको बताउँदै आएका छन् ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली आफूलाई सम्झना भएदेखि आफूले टोपी लगाउँदै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैले भूमिगत कालमा भने टोपी लगाउन छाडेँ । किनकि, प्रहरी–प्रशासनलाई छल्नका लागि टोपी नलगाएको हुँ त्यतिबेला ।’
किन टोपी लगाउनु हुन्छ त ? नेता ज्ञवाली भन्छन्, ‘नेपाल विविध भाषा, धर्म, जातजातिले भरिएको देश हो । सबैको आ–आफ्नै पहिचान छ । त्यही पहिचान कायम गर्न नै मैले टोपी लगाएको हुँ ।’ उनले भादगाउँले टोपी लगाउँदा नेपाली मौलिकपना झल्किने पनि बताए । भने, ‘मलाई नेपाली टोपीलाई लगाउँदा कुनै अप्ठेरोपन महसुस हुँदैन । टोपी लगाउँदा निकै राम्रो र आकर्षक देखिन्छु ।’
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विष्णुविभू घिमिरेले भने पहिला टोपी लगाए पनि बीचमा भने लगाउन छाडेका थिए । उनी भन्छन्, ‘तराईतिर बस्ने भएकाले गर्मी हुन्थ्यो, त्यही कारण केही समय टोपी लगाइनँ तर पछि भने मैले निरन्तर रुपमा लगाउँदै आएको छु ।’
किन लगाउनु हुन्छ त टोपी ? घिमिरेको भनाइ छ, ‘पहिलो कुरा त टोपी नेपालीको राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो । विश्वमा नेपालको छुट्टै पहिचान दिने एकमात्र चिज नै टोपी हो । दोस्रो कुरा, चिसोबाट बच्नका लागि पनि टोपीले सहयोग गर्दछ । त्यसैले म टोपी लगाउँछु ।’ सबै कुरा बानी परेपछि अफ्ठेरो नहुने बताउँदै घिमिरले भने, ‘अचेल त मलाई टोपी नलगाउँदा पो अफ्ठेरो महसुस हुन्छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले सानै छँदादेखि नै टोपी लगाउन थालेका हुन् । उनी भन्छन्, ‘मलाई बुवाले नै टोपी लगाउन सिकाउनुभएको हो । म स्कुल पढ्दादेखि नै टोपी लगाउँथेँ ।’ टोपी लगाउँदा सान नै अर्कै हुने पनि उनले बताए । आफूले टोपी लगाउँदा त्यति असहज नहुने पनि उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म विदेश जाँदा पनि टोपी लगाउँछु र स्वदेशमा औपचारिक कार्यक्रमहरुमा जाँदा प्रायः दौरा, सुरुवाल र टोपी लगाउँछु ।’
एमालेका युवा नेता झपट रावललाई भने परिवारमा हजुरबुबा र बुवाले टोपी लगाएको देख्दा सानैदेखि आफूलाई पनि लगाउने रहर लाग्थ्यो । तर, उनले टोपी लगाउन थालेको अनेरास्ववियुको राजनीतिबाट बिदा भएर युवा राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखि नै हो । उनी भन्छन्, ‘टोपी नेपालीको पहिचान हो भन्ने कुरा बुझेदेखि मैले टोपी लगाउन थालेको हुँ । मलाई टोपी लगाउँदा कुनै झन्झटिलो महसुस हुँदैन ।’